MAXAA CAAN KA DHIGAY FAARAX C/QAADIR Mise yahay dhibane u dhiban dad aan ogeyn sababta iyo ujeedada… | Newsomali
Friday, January 13th, 2017 | Posted by admin
Shalay waxaa doorasho cod qarsoodi ah looga adkaaday Faarax C/qaadir oo u tartamayay jagada guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya, daqiiqado kadib guuldarada Faarax ka soo gaartay doorashadaas waxay sababtay in baraha bulshada la isku dhaafsad hadalo iska soo horjeeda.
Dadka qaar waxay la dhacsanaayan sidii wax u dhaceen gaar ahaan guusha raacday C/weli Muudey, halka qaar kale farxadii ka luntay hase yeeshe waxaa la yaab ahayd hadalada aflaqaadada ee loo geysanayay Faarax C/qaadir oo ah shaqsi afgaaban ayna adag tahay inuu si bareer ah qof wax uga sheego.
Gar labo qof kama qosol siiso, haddii la tartamo qof ayaa guuleysan lahaa, qofna uma dhalan guusha iyo guuldarada, taasina wax dhib ah kuma jirto.
Hadiiba tartankii dhamaaday waxay ahayd in loo soo wada jeesto danta guud iyo u adeegida qaranka laakiin ma a aysan ahayn in la bartimaameedsado qofkii laga adkaaday iyadoo dano siyaasadeed laga leeyahay.
TUSAALE Donald Trump IYO H.Cliton waa la wada ogsoon yahay hadaladii ugu xumaa labo qof oo tartamaysay dhex mara ayaa labadooda isku adeegsadeen markii ololaha doorashada Mareykanka socday, hase yeeshe markii ay dhamaatay doorashada qof kasta meesha ayuu kaga dhaqaaqay wixii ka tabanayay qofka kale.
Laakiin dadka soomaaliyed oo u badan dad raaca dabeesha halka ay u socota, hubsi la’aana qof u bartimaameedsada siyaasadda kama aysan gaarin meeshii looga baahna.
Waxaa is weydiin leh marka maxaa sabab u ah in hadal haynta ugu badan ama shaqsiga ugu magaca dheer ka dhigay Faarax C/qaadir ileyn dalka kama aha Madaxweyne, Guddoomiye Baarlamaan ama Ra’iisal wasaare.
Marka laga soo tago inuu Xildhibaan ahaa labo mar ayuu soo galay Golaha Wasiirada, mar waxaa uu soo noqday Wasiiru Dowla, marna Wasiirka Cadaalada.
Waa jirtay shaki ah in Faarax ay is qabteen mid ka mid ah Ra’iisal Wasaarayaashii dalka soo maray laakiin is qabqabsiga iyo shaqada waa wada socota.
Arrinta la yaabka leh waxay tahay ilaa iyo hadda cadeyn buuxa looma haayo meel Faarax hantida qaranka ku dhacay, qof uu dilay ama xabsi dhigay ama dhaqaale Faarax Dowladda ka boobay oo Banki lagu xayiray.
Dabcan beelaha soomaalida qaarkood iyo siyaasiyiin isku arka in talada dalka iyaga looga maarmin ayaa Faarax u sameeyay colaad iyo dacaayado shaqsiyan lagu bartimaameedsado, soomaalidii kalena iyagoo aan waxba hubsan ayay raaceen faafinta dacaayadahaas.
Magacyo been ah iyo awood dheeri ah ayaa Faarax loo sameeyay 4 tii sano ee xilka haayay Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana arrimahaas ka qeyb qaatay web site-yada iyo Warbaahinta Soomaalida oo gacanta ku haaya shaqsiyaad ka soo jeeda beelaha la sheega inay ugu waa weyn yihiin kuwaas oo danahooda siyaasadeed ka waayay Xasan Sheekh kadibna go’aansadeen in Faarax laga dhigo qofka ka dambeeya Xasan.
Waana habka ay isticmaalan reer galbeedka Media ay leeyihiin qofkii ay u arkaan inuu danahooda ka soo horjeeda waxay ka faafiyaan dacaayadaha, toosh ayaa lagu iftiimiya si loo tuso bulshada.
FAARAX C/QAADIR waa dhibane u dhiban dad aan ogeyn sababta iyo ujeedada ka dambeysa in la bartimaameedsado Faarax.
Mida kale dambi ma aha in aad saaxiib ahaatan qof talada dalka haaya ama isku xisbi ahaatan,haddii Faarax ka mid yahay saaxiibada Xasan Sheekh taasi waxba kuma jaban qof kasta oo talada dalka qabta saaxiib iyo dad wax ka maqla ayuu leeyahay dunida kalena sidaas si la mid ah ayay uga jirtaa.
Faarax weli waxaa uu ka mid yahay Baarlamaanka cusub ilaa iyo 2020 ka waxaa uu sii ahaanaya Xildhibaan, dowladii ayuu ku dhex jiraa wuxuuna metelaya shacabka soomaaliyed sidaas darteed waxaa haboon in la iska ilaabo waxyaabaha raqiiska ah ee lagu dhaawacyo shaqsiyada Faarax.
Dadka Soomaaliyed waxaan kula talin lahaa inay ka fogaadan wax alla wixii kaa reebaya diinta iyo dhaqanka soomaaliyed ee ah inaad wax ka sheegtid qof uusan ku haysanin ama dhib kuu geysanin, talada dalka umadda oo dhan ayay ka dhaxeysa maanta koox ayaa xukunka haysa berina koox kale ayaa imaanaya maamula waa wareegto sidaas darteed intii aad isku mashquulin lahayd wax ka sheegida shaqsi waxaa haboon inaad ka shaqeysid horumarka dalkaada.
Posted by admin on Jan 13 2017. Filed under Qormooyinka, Wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry